‘यत्रो पढेको साला ५ हजारको लागि हो ?’ | PaniPhoto
‘यत्रो पढेको साला ५ हजारको लागि हो ?’	पानीफोटो / May 9, 2012 / 8 Comments -इश्वर खनाल-
समूहमा विश्वास गर्नेले ‘अब हामी केही त गरौं न’ भन्ने गरेको पाइन्छ थेगो जस्तै । तर, समस्या एउटै सबैको के र कसरी गर्ने ? जब आफुले के गर्ने र आफ्नो योजनालाई कसरी समन्वय गर्ने भन्ने द्धिविधा आउँछ, आश्वासनको मात्र बाढी लाग्छ, तब सुरु हुन्छ ‘कन्सल्टेन्सी’हरुको ढोका चहार्ने क्रम । अनि ‘म केही गर्छु’ भन्ने एउटा युवाशक्ति पलायन हुन्छ ।
आज एउटा अन्तर्वाता दिन गएको, ठीक छ, हामी पछि कल गर्छौ भनेर फर्काइदियो यार,’ एउटा साथीले चियाको चुस्किसँगै साथीभाइको जमघटमा सुनाउँछ । काम पाउँन पनि गार्‍हो छ यार, सोध्दै तपाईले पहिला कँही काम गर्नुभएको छ ? भनेर सोध्छन् । छैन भन्यो भने तपाईको तलबको अपेक्षा कति छ भन्छन् । ८/१० हजार भन्यो भने चै उनीहरु ५/६ हजारको कुरा गर्छन् । यत्रो पढेको साला ५ हजारको लागि हो ? उ आक्रोशपुर्ण प्रश्न साथीहरुसामु तेस्र्याउँछ ।
रत्नपार्क होस् या कुनै सभासम्मेलनमा, भेला भएका युवा, चोभार वा गोदावरीको डाँडामा भेटिने जोडी अथवा कुनै रेस्टुरेन्टमा चिसो पेयसँगै गफमा रमिरहेकाहरु । सोध्यो भने जवाफ फरक फरक । तेत्तिकै, कामै छैन, कलेज बन्द छ, टाइम पास गर्न, यस्तै यस्तै । तर चुरो कुरो एउटै छ समयको महत्व नबुझ्नु । पहिलो कुरो उनीहरु कहि संलग्न छैनन् वा अवसर पाएका छैनन् । दोस्रो कुरो हामी अवसर अरुले नै सृजना गरिदिओस् भन्ने हामी सोच्छौ । फेरि हामीसँग अनेक बहाना पनि छन् । ट्राफिक जाम थियो, बिर्सिए, फुर्सदै भएन आदि । हामी यस्तै बहाना बनाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पञ्छिन खोज्छौ पनि ।
प्रश्न त यही नै हो, यस्तो गैरजिम्मेवारीले अन्ततः घाटा कसलाई पुर्‍याउँछ ? फेरि हामी अरुलाई दोष लगाउँन पनि माहिर नै छौं । परिक्षा फेल भयौं भने भन्छौ पढाउँने राम्रो भएन । घरको फोहोर सडकमा फाल्छौ र भन्छौ नगरपालिकाले फोहोर उठाएन । सभासदले समयमा संविधान बनाएनन् भनेर त भन्छौ तर सबै सभासद आफैले पठाएका हौ भन्ने हामी सोच्दैनौं । गैर जिम्मेदार सभासद पठाउँने हाम्रो पनि दोष छ भनेर हामीले सायदै सोच्यौ ।
हामी ठुला नारासाथ कहिले बाग्मती र कहिले एयरपोर्ट सफा गर्न गइरहन्छौं । विशेष योजनाबिना गरिएको एकदिने कार्यक्रमले कुनै ठुलो परिवर्तन ल्याउँने पनि होइन । त्यस्ता कार्यक्रमा मिडिया र मन्त्री पनि पुग्ने नै भए । कार्यक्रममा मन्त्रीले बोलेको कुराले मिडियामा महत्व पाउँछ । र, सम्पुर्ण कार्यक्रमको उद्देष्य नै छाँयामा पर्छ । अर्को कुरा हामी आफु बसेको कोठा, घर, अफिस वा वरपरको चोक वा टोल चाँही कत्तिको सफा छ त ? तर हरेक कुराको सुरुवात त व्यक्तिबाट हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी कमै सोच्छौ । हामी शिक्षित त धेरै नै छौ तर सचेत कम छौ । परिवर्तनको ठुलो कुरा गर्दैगर्दा हामी स्वयं चाही कति परिवर्तन भयौं भन्ने कुरा हामीले मनन् गर्नु जरुरी छ । हाम्रो सोच, व्यवहार अनि दृष्टिकोण कमजोर छ । हामी सुन्न भन्दा धेरै बोल्छौ वा बोल्न मन पराउँछौ । तर, बोल्नु र सुन्नु त भात खानु र पकाउँनु जस्तै हो । जब हामीलाई खाना बनाउँन आउँदैन भने हामी कहिलेकाही भोकै रहने सम्भावना रहन्छ अर्थात दुख हुन्छ । त्यसैले हामीले बोल्ने प्राथमिकताभन्दा सुन्ने क्षमता बढाउँने हो कि ।
ट्राफिकलाई गाली गर्नुभन्दा जामबाट मुक्त हुन हामी आफैले ट्राफिक नियमको पालना गर्ने हो कि । काम सानो ठुलो हुन्न भनेर आफ्नो लागि कामको आफैले सृजना गर्ने हो कि । अरुको दोष नियाल्नु भन्दा आफैलाई नियाल्न र आफ्नो सामथ्र्य खोज्नु र चिन्न कसरत गर्ने हो कि ।
अश्विनी गदाल says: June 14, 2011 at 9:39 am / Reply
सुन्दा त राम्रै लाग्छ, भन्न त झन् कति सजिलो । आफ्नो लागि आफैले कामको सृजना गर्नु पर्छ । तर कामको सृजना भनेको के हो? कसरी हुन्छ त्यो ? तरकारी रोपौ बारीमा ? मल भनेको समयमा कसले दिन्छ ? बजार खोइ ? बजार भएपनि लाने बाटो खोइ ? साइबर खोलौ ? कतिवटा चल्लान् एउटा टोलमा ? काम खोज्नका लागि उद्योग हुनुपर्दैन ? हराको काम हो र ?
अभिनव says: June 14, 2011 at 1:49 pm / Reply
एउटाले भनेछ, मेरो फेसबुक छ, ट्विटर छ, अर्कुट छ । तेरो के छ ?दोस्रोले भन्यो, मेरो काम छ । समग्रमा हामी फेसबुक भएका धेरै छौ ।
rabina manandhar says: June 15, 2011 at 6:34 am / Reply
What can we do , If we dont have money and chineko manchhe?
Anonymous says: June 15, 2011 at 6:35 am / Reply
mero pani din yasai gareera katchha, ma ke garau. ma sanga na paisa chha, na maile chineko kohi chha. sala saudi nai janu parne vo.
nepali says: June 15, 2011 at 6:40 am / Reply
नेपाल , हाम्रो नेपाल
santosh niroula says: June 15, 2011 at 8:14 am / Reply
its very easy to tell and more than very hard to face. We are facing this.
bina says: May 15, 2012 at 12:39 pm / Reply
भन्न सजिलो गर्न गार्हो ….जति पढेपनि कम चाही पुन गार्हो नै छ….सृजना चाही कसरि गर्ने….सृजना गर्न दिमाग पनि सृजनासिल हुनु पर्यो नी
bina says: May 15, 2012 at 12:41 pm / Reply
आजकाल जती पढे पनि कम गर्दा ५००० बाहेक बढी नै औदैना क गर्नु यस्तै रहेछ यहाको चलन